Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Iphetshana lokuGonya amaPolisa laseFrance laseParis alinanto eCafés
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Culinary • inkcubeko • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Shopping • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Iivenkile ezininzi zendlela yokulala zazihleli zingenanto kuba abathengi bazo bakhetha ukuhlala kwizitulo zikawonkewonke ngaphandle.
IMacron yandisa ipasi lokuthintela iivenkile zokutyela.
Abo bangenapasi bajongana nesohlwayo se- € 135.
Intlawulo inyuswe yaya kuthi ga kwi-9,000 yee- € ngenxa yesiphoso.
Namhlanje, urhulumente kaMongameli wase-France u-Emmanuel Macron wandise isigunyaziso 'sokudlula sanitaire' kwiindawo zokutyela, kubandakanya nezangaphandle, ngokungakhathaleli impelaveki yoqhankqalazo eFrance.
Amapolisa aseFrance aseqalisile ukungena kwiivenkile zokutyela kunye nasekutyeni kwaye anyanzelisa isidingo sokugonywa, okukhokelela ekubeni iitafile zabo ezininzi zingabinanto ngexesha lesidlo sasemini esixakekileyo, nanjengoko abantu baseFrance babesitya ebhentshini.
Indawo yokutyela kunye nevenkile yokutyela ngaphandle kokupasa bajonge isohlwayo se- € 135 ($ 158), esiya kunyuka siye kwi-9,000 eerandi ($ 10,560) ngesenzo esiphindayo.
Ngexesha lesidlo sasemini, iivenkile ezininzi zeendlela zendlela bezihleli zingenanto njengoko abathengi abaqhelekileyo bakhetha ukuhlala kwiibhentshi zikawonkewonke ngaphandle-ngokobuninzi beefoto kunye nezimvo ezithunyelwe kwimidiya yoluntu, kunjalo.
Iividiyo zosasazo zasekuhlaleni kunye neefoto zibonise iindawo zangaphandle ezinendawo zokutyela ezimbalwa kwiChamps Élysées, Paris'eyona ndlela iphambili.
Kwakukho iifoto zeetafile ezingenanto kanye esixekweni ngamaxesha apho ezo ndawo zihlala zizele.
IGrande Brasserie eyaziwayo, kufutshane nesikwere iBastille, yayinabathengi abambalwa ngaphakathi, kodwa kwakungekho mntu uphuma kwipatiyo yayo.
Ukupasa, okwaziswa nguMacron ukunyanzelisa ugonyo ngokuchasene neCovid-19, kuye kwanyanzeleka ukuba kungenwe kwiimyuziyam, kwiithiyetha zemiboniso bhanyabhanya, kumadama okubhukuda nakwezinye iindawo ukusukela ngoJulayi 21. Iinkundla ziye zagweba ukuba kumgaqo-siseko ukugunyazisa ukugonywa kwabasebenzi bezempilo. , abanye babo baye baqhankqalaza bekhalaza.
Ukujongana nenani elonyukayo le-COVID-19 yamatyala abangelwa kukungafani kwintsholongwane ye-Delta, abasemagunyeni baseFrance bacinezele nzima ukugonya wonke umntu. Okwangoku, abenzi bokugonya Pfizer kwaye Kule mihla banyuse kakhulu amaxabiso ezitofu zokugonya kwi-European Union.